12 Series ထဲက Screen Size အသေးဆုံး iPhone 12 Mini — Anycall Mobile
12 Series ထဲက Screen Size အသေးဆုံး iPhone 12 Mini
Apple ရဲ့ iPhone 12 Series ဟာ October လလောက်မှာ ထွက်လာတော့မှာကို စာဖတ်သူအားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီ iPhone 12 Series ထဲမှာဆိုရင် iPhone 12 ၊ iPhone 12 Max ၊ iPhone 12 Pro ၊ iPhone 12 Pro Max စတဲ့ဖုန်းလေးလုံး ပါလာမယ့် အကြောင်း သတင်းထွက်ထားပါတယ်။
အခုမှာတော့ 5.4 inch iPhone 12 ဟာ iPhone 12 Mini လို့ခေါ်လာမှာ ဖြစ်ပြီး iPhone 12 Max ကတော့ iPhone 12 လို့ပဲခေါ်လာမယ်လို့ သတင်းတေွပေါက်ကြားလို့လာခဲ့ပါတယ်။
Apple အနေနဲ့ဒီလို Mini ဆိုပြီး နာမည်ပေးတာက အခုမှစလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အရင် iPad နဲ့ Mac တွေကတည်းက Mini ဆိုပြီး နာမည်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ iPod တွေမှာလည်း Mini ဆိုပြီး နာမည်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဆိုတော့ iPhone 12 Series ထဲမှာ iPhone 12 Mini ၊ iPhone 12 ၊ iPhone 12 Pro ၊ iPhone 12 Pro Max တို့ ပါလာဖို့က သေချာသလောက် ရိ‌ှနေပါပြီ။
ဒီ iPhones အသစ်‌ေတွမှာ 5G ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ A14 5nm Bionic Chipset နဲ့ အားဖြည့်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ A14 5nm Bionic Chipset ကြောင့် ဖုန်းတွေရဲ့ Performance ကတော့ အရင်ကထက်သိသိသာသာ တိုးတက်လာမှာပါ။
နောက်ထပ် ဒီဖုန်းအားလုံးမှာ 60Hz refresh Rate OLED Display ကိုသုံးပေးလာမှာဖြစ်ပြီး Notch တွေကလည်း ပိုသေးသွားမယ်လို့ အရင်ကထွက်ထားတဲ့ သတင်းတေ‌ွအရ သိရပါတယ်။ ဒီမှာစိတ်မကောင်းစရာကတော့ High Refresh Rate ပါလာခြင်း မရှိတာပါပဲ ။ High Refresh Rate တွေ မလိုဘူးဆိုတာကို သက်သေပြချင်လို့များလား ? ဒါမှမဟုတ် အားအရမ်းစားမှာကို ကြောက်နေလို့လား ? :xD
နောက်ထပ် Apple ဘက်ကနေ Electronic Waste ကိုလျော့ချဖို့ iPhone 12 Series ရဲ့ ဘူးထဲမှာ အရင်လို အားသွင်းခေါင်း ဒါမှမဟုတ် Earphones တွေထည့်မပေးဘဲ ရောင်းချပေးလာဖို့ ရှိနေတယ်လို့ သတင်းထွက်ထားပါတယ်။ သီးသန့် Charger တစ်ခုကို ထပ်ဝယ်ရမယ့်သဘောရှိနေပါပြီ။
ကဲ…ဒါဆို ဒီသတင်းတွေတကယ်မှန်လား မမှန်လားသိရဖို့ လာမယ့် October Event ကို အတူတူရင်ခုန်ရင်း စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင် ..
Ref: GizmoChina, MacRumors, GsmArena
appleiPhone 12 MiniiPhone 12 Series